Shaybaadhka Batroolka - Newsway Valve Co., Ltd.
Shaybaadhka batroolka waxaa loola jeedaa warshad soo saarta naaftada, shidaalka, gaaska, saliidda saliidda, batroolka coke, asphalt, iyo ethylene oo laga soo qaado geeddi-socodka sida kala-soocidda, kala-soocidda, dildilaaca, dildilaaca, iyo soo-saarista saliidda ceyriin ee laga soo saaray sameynta.
Furayaasha ay soo saarto NEWSWAY waxay si buuxda u buuxin karaan qalabka kala duwan ee looga baahan yahay warshadda sifeynta si looga hortago dabka, qaraxyada iyo xaaladaha kale ee halista ah loona hubiyo in qalabku u shaqeeyo si ammaan ah.
Qeybaha sifeynta, unugyada sida caadiga ah loo isticmaalo iyo xulashada waalka ee u dhigma ee ay sameyso waalka NEWSWAY:
Aaladda Catalytic: fureyaasha fiilada, hal-waddo fuuq-bixiyeyaasha qashin-qubka, heerkulka sare ee baalal-balanbaalka, farsamooyinka balanbaalis ee pneumatic, filtarka albaabka heerkulka sare, inta badan heerkulka sare ee waabarada u adkaysta.
Wax soo saarka Hydrogen, hydrogenation, unugga dib u habeynta: waalka kubbadda wareegga, waalka xakamaynta, nooca Y ee adduunka, waalka balanbaalis ee baaldiga, waalka cadaadiska sarreeya, cadaadiska ayaa badanaa ka sarreeya 1500LB.
Qalabka sigaarka: laba-waji kubbadda, afarta-waalka kubbadda, tuubada wax lagu xidho, oo inta badan ku saleysan filtarka heerkulka sarreeya, maaddadu badanaa waa birta chrome-molybdenum. Cadaadiska sare ee walxaha adag ee adag, badanaa laga bilaabo 1500 LB ilaa 2500 LB.
Qaybta hawada iyo hawada faaruqinta ah: waalka korantada korontada, oo ka samaysan chrome molybdenum iyo bir bir ah
Qalabka baaruudda: waalka weyn ee jaakada dahaadhka, waalka albaabka jaakadaysan, waalka kubbadda jaakadaha leh, waalka jaakad xiran, jaakada balanbaalis jaakad ah.
Qalabka S-zorb: Birta adag ee birta adag, oo loo baahan yahay in la xidho iyo heerkul sarreeya.
Qaybta Polypropylene: birta birta ee birta ah ee birta ah
Ma jiro qalab gaar ah: inta badan xakamaynta waalka: waalka balanbaalis ee pneumatic, waalka kubada pneumatic, waalka kubada pneumatic, waalka xakamaynta adduunka iyo wixii la mid ah.